प्रदेश खबर – दाङ खबर
सडक वत्तीको अवस्था : कतै बेहाल कतै काम चलाउ
गोकर्ण पौडेल दाङ, भदौ ४ । जिल्लाका अधिकांश शहरी क्षेत्रका सडक बत्तीको अवस्था कतै बेहाल छ भनेँ कतै काम चलाऊ अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्लाको तुलसीपुर क्षेत्रका सडक बत्तीको बारेमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपनि सडकबत्तीको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बजार क्षेत्रभित्र सोलार बत्ती जडान गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता श्याम डाँगीले जानकारी दिनुभयो । बजारको क लाइनमा २० वटा , बरागाउँमा १२ र गाइडर क्षेत्रमा २ वटा सोलार बत्तीमा डबल सिस्टमका कारण बिग्रिएकाले पुन जडान गर्न थालिएको प्रवक्ता डाँगीले जानकारी दिनुभयो । सोलार बत्ती नेपालमा नपाइने र चिनबाट माग भएकाले जडानका लागि केही समय लाग्ने बताइएको छ । जिल्लाको ऐतिहासिक बजार क्षेत्र बिजौरीमा भनेँ उद्योगी व्यवसायीहरुको पहलमा सडकबत्ती जडान गरिएको छ । बिजौरी उद्योग वाणिज्य संघले सडकबत्तीको रकम मासिकरुप
काँग्रेस कार्यकर्ता भन्छन: पार्टीमा गुट कहिले सकिन्छ?
दिवाकर पोख्रेल देउखुरी भदौ ४। नेपाली काग्रेसका कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई गुटउपगुट त्याग्न आग्रह गरेका छन् । उपउपगुटले काग्रेस थलिएको भन्दै कार्यकर्ताहरुले उच्च नेतृत्वबाट गुटको राजनीति नत्यागे नेपाली काग्रेस समस्यामा पर्ने बताए । दाङको लमहीमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सहभागि नेपाली काँगेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका केन्द्रिय नेतासंग कार्यकर्ताले यस्तो बताएका हुन । तरुण दलका क्षेत्रीय अध्यक्ष किरण पौडेलले जनप्रतिनिधिले पार्टी विर्सीएको भन्दै जनप्रतिनिधिले काँग्रेस सम्झन्छन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै तरुण दलकै लमही नगर अध्यक्ष सन्तोष बिसीले काँग्रेसको बहुमत रहेको स्थानीय तहमा जनभावना अनुरुप काम गर्न नसेको बताउनुभयो । जनमुखी काम नगर्ने उच्च नेताहरु आपसमै भिड्ने गर्दा कार्यकर्तामा निराशा छाएको उहाँको भनाइ थियो । काँग्रेस कार्यकर्ता नवाव अलीले पाटीमा मौल्याएको गुटको र
बेवारिसे अवस्थामा एक शव फेला
दाङ भदौ ४ । दाङको लमहीमा बेवारिसे अवस्थामा सव फेला परेको छ । आज लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ अर्जुन खोलामा सव फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सवको पहिचान हुन नसकेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरिक्षक प्रज्वल थपलियाले बताउनुभयो । घटना स्थलमा वडा प्रहरीको टोलि पुगिसकेको छ । घटनाको बारेमा थप अनुसन्धन भइरहेको थपलिको भनाई छ । सवलाई स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
विजुली दु:ख: लोडसेडिङ हुँदैन तर बत्ति बल्दैन
प्यूठान भदौ ४ । विजुली दु:खले प्यूठानी आक्रान्त पारेको छ। घरी आउने, घरी जाने विजुलीले उनीहरु हैरान छन्। १२ मेगावाट क्षमताको झिमरुक जलविद्युत आयोजना जिल्लामै संचालित छ। तर, प्यूठानीका विजुली दु:खमा कमि आएको छैन। दैनिक २०/२५ पटक विद्युत जाने गरेको प्युठानका उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। अनियमित विद्युत समस्या समाधानका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुनासो छ। ‘अनियमित विजुलीले धेरै समस्या भयो’,प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारमान कक्षपतीले भने,‘नियमित आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई धेरैपटक भन्यौँ तर सुन्दैनन्।’ यसबाट विजुलीबाट संचालन हुने साना तथा घरेलु उद्योगहरु बढी मारमा परेका छन्। कुटानी पिसानी मिल, पाउरोटी उद्योग, ग्रिल, कम्प्यूटर इन्सिच्यूट लगाएतका उद्यम व्यवसायहरु चौपट बनेका छन्। साना उद्योगहरु विजुलीकै समस्याले बन्द ह
बाँके भदौ ४ । बाँकेका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले प्रत्येक तीन—तीन महीनामा कार्यालयको सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके तथा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रले संयुक्तरूपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको कार्यान्वयन, अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा जिल्लाका सूचना अधिकारीहरुले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अन्तरक्रियामा बाँकेका सरकारी कार्यालयका सबै सूचना अधिकारीहरु, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु र अन्य गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई सबै तहले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँदै सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्दा कार्यालयको कामकारवाही सुशासनमय तथा पारदर्शी हुने बताए । सूचना अभिया
अरिङ्गालले टोक्दा एक युवकको मृत्यु
पाल्पा भदौ ४ । अरिङ्गालको टोकाइबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-१२ बौघापोखराथोकका २१ वर्षीय हेमु रानाको अरिङ्गालले टोक्दा मृत्यु भएको हो । घरनजिकै रहेको रुखमा अरिङ्गालको गोलो पोल्न गएका राना अरिङ्गालले टोकेर घाइते भएको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी उपरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले बताउनुभयो। उनको मंगलबार दिउँसो करिब १ बजेतिर तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
दाङ भदौ ४। दाङमा पहिरोको जोखिम त्यति धेरै नभए पनि बाढीको जोखिम भने अत्यधिक रहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै ठाउँ बाढीको जोखिममा छ । अघिल्ला वर्षमा खेतवारीसँगै घर बगाएपछि यहाँका स्थानीय निकायसँगै प्रशासनसमेत क्षेत्रसमेत सचेत बनेको देखिन्छ । दाङका १०० वडामध्ये ३५ वडा बढी जोखिमपूर्ण वडाका रुपमा घोषणा गरिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार विशेषगरी बबई र राप्ती नदी आसपासका गाउँ बढी जोखिममा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जोखिम भनिएका ३५ वडामध्ये १५ वडामा जोखिमको पूर्वसूचना दिने साइरन प्रणाली जडान गरिँदैछ । प्रशासनको हाताभित्र जोखिमको अवस्था बुझ्न डिजिटल सूचना बोर्डको जडानसमेत गरिएको छ । जिल्लामा जुनसुकै प्रकारको जोखिम आएपनि खोज तथा उद्धारका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको प्रजिअ रिजालले बताए । अहिले प्रशासनसँग जोखिममा परेमा तत्काल
नेपालगन्ज भदाै ४ । यहाँस्थित प्रमुख शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा श्रद्धालुले जग्गा दान गर्ने परम्परा थियो । धन हुनेले सुनचाँदीका मूर्ति र नगद चढाउँथे । चल सम्पत्ति नहुनेहरूले जग्गा दान गर्ने चलन थियो । बाँके मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा ०२५ सालसम्म मन्दिरका नाममा ९९ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा देखिन्छ । साविकका कर्मोहना इन्द्रपुर गाविस र अहिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासित जोडिएका जानकी र खजुरा गाउँपालिकामा उक्त जग्गा थियो । दानबाट मन्दिरका नाममा आएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई कमाउन (खेतीपाती गर्न) दिने र त्यसबाट उठ्ने मालपोत कर र उत्पादनले नित्य पूजा गर्ने चलन थियो । मन्दिरमा सन्तमहन्त आए आवास तथा हन्डी दिने र पूजाआजा कार्य चलाई शेष बचत भए महन्तका सन्तान दरसन्तानले उपभोग गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले दानबाट प्राप्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको पाइएको छ । बागेश्वरी मन्दिर राजगुठीमा दर्